Onye na-ahú maka ego na akụnaụba ala Naijiria
Ngọzị Okonjọ-Iweala rụrụ ọrụ dịka Mịnịsta na-ahụ maka ihe niile gbasara ego (Minister of Finance) na Naịjiria. Ọ rụrụ ọrụ mịnịsta ugboro abụọ: sitē n’afọ 2003 rue afọ 2006; sitekwa n’afọ 2011 rue 2015. Tutu ọ rigoo n’ọkwa mịnịsta, ọ rụrụ ọrụ iri afọ abuo na ise n’ọba ego nke mba ụwa rue n'ọkwa "Managing Director" n’ahụ maka otu ọrụ niile si-aga na ya bụ oba ego. Ọ nọrọ n'ọkwa a afọ anọ (site n’afọ 2007 rue 2011). Ugbua, Okonjo-Iweala bụ onyeísīoche bọd na-ewepụta ihē ndị a ga-elegara anya na-èmē ihē n’òtù na-aza Global Alliance for Vaccines and Immunization, nakwa na Standard Chartered Bank, ma sorokwa na bọd ndị Twitter na African Risk Capacity (ARC).
Ndụ na Agụmakwụkwọ YaMèzi
N’ụlọ akwụkwọ St. Anne, dị na Molete, Ibadan ka Okonjo-Iweala malitere akwụkwọ. Ka ọ gụchara akwụkwọ elementịrị, ọ gbagoro n’ụlọ akwụkwọ ọzọ dịkwa n'Ibadan aha ya bụ “International School”, gụkwaa ākwụkwọ na mahadum dị na Harvard (Havard University) na mba Emerịka. O tuuru ugo na Havard site na-iji "magna cum laude" na AB gụchaa ākwụkwọ ya n'ekọnọmikisị n'afo 1976. O nwetakwara Ph.D. (Doctor of Philosophy) n'ihe banyere ọnọdụ akụnụba na mmepe obodo. Ọ bụ n'afọ 1981 ka o siri n'ụlọ akwụkwọ ukwu nkà na ụzụ dị na Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) nweta nzere Ph.D. a na mba Emerịka. Òtù ụmụnwanyị na-arụ ọrụ na mahadum na mba Emerịka (American Association of University Women) nyere ya nkwado ego maka ya bụ Ph.D., nihi na ụbụrụ ya dị nkọ.
Ijeozi Ya na GọọmentịMèzi
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Ngozi Okonjo-Iweala
Wefụtàrà ya shí https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngozi_Okonjo_Iweala&oldid=66587
Last edited on 3 Ọnwaìtoolu 2020, at 22:00
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 3 Ọnwaìtoolu 2020, mgbe 22:00